2.စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်, ထုတ်လုပ်မှုတိုတို,လျော့နည်းကျန်နေတဲ့ဆန်နှုန်း. စပါးကိုဆန်နှင့်ဖွဲသီးအဖြစ်သီးခြားခွဲပါ. ဒါ့အပြင်ကြိတ်စက်ကပြောင်းဖူးကြိတ်ခွဲနိုင်ပါတယ်,ဆန်မှအမှုန့်.
3.Mini အရွယ်အစား,အလေးချိန်ပေါ့,တာရှည်ခံအရည်အသွေးနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသည်, ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းနှင့်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်.
ဆန်စက်နှင့်ကြိတ်စက် ,နှစ်ခု functions.rice ကြိတ်နှင့်ဆန်ကြိတ်စက်နှင့်အတူတ ဦး တည်းစက်.
1.ဆန်စက်စက်ကိုအဓိကအားဖြင့်မိသားစုဆန်စပါးကိုအဖြူရောင်ဆန်အဖြစ်ပြောင်းသည်, လယ်ယာမြေ, စပါးကိုပြုပြင်စက်ရုံစသည်တို့ကို. အခွံနှုန်းထက်ပို 95%.
2.ကြိတ်စက်သည်အမြန်နှုန်းလည်ပတ်မှုမှတဆင့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်, အမှုန့်မှပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းများများ၏တိုက်မှု, အသုံးပြုသူရဲ့ requirements.Grinding စီးရီးအထူးပစ္စည်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပင်အမှုန့်စေရန်ဆန်ခါတဆင့်ဆေးရုံကဆင်း:ဆန်,ဂျုံ,ပြောင်းဖူး glutinous ဆန်, granular အသားအရေ, ငရုတ်ကောင်း, နံ့သာမျိုး, စသည်တို့.
2.မော်တာ drive တစ်ခု2ကုန်ကျစရိတ်ကိုချွေတာရန်ကိရိယာများ,ပါဝါ configuration ကိုအဆင်ပြေသည်, ဆန်စက်နှင့်ကြိတ်စက်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်, ထို့အပြင်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်,ဒီဇယ်အင်ဂျင်.
3.ဆန်စက်သည်ဆန်ဆန်အမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည် (optional ကို 0.7mm, 1.0မီလီမီတာ, 1.3မီလီမီတာ), ဒါကြောင့်မတူညီတဲ့ပစ္စည်းများ process နိုင်ပါတယ်;ဆန်စက်ကြိတ်စက်၏ရွေးချယ်နိုင်သောအရွယ်အစားမှာ ၀.၂ မှ ၀.၆.၆ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားကို ၀ ယ်ယူသူမှရွေးချယ်နိုင်သည်.
4.အလိုအလျောက်ဂီယာခါးပတ်ပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာနှင့်အတူလိုက်ဖက်, switch လက်ကိုင်သည်ဆန်စက်နှင့်ကြိတ်စက်ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်သည် ,ဆန်စက်များလည်ပတ်နေစဉ်သို့မဟုတ်သင်ကြိတ်သည့်အခါကြိတ်စက်သည်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းသေချာစေသည် ,ဆန်စက်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး.
5.သေးငယ်တဲ့ဆန်စက်နှင့်ကြိတ်စက်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်နှင့်လွယ်ကူသည်, ဆန်စက်စည်နှင့်မီတာညှိနှိုင်းမှုကိရိယာ, လှပသောပုံရိပ်ရရှိရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း, သက်ဆိုင်, သန့်ရှင်းသောသက်ရောက်မှုများ,wear- ခံနိုင်.
6.ဖုန်မှုန့်စက်၏ထိုင်ခုံသည်ဖုန်မှုန့်များမ ၀ င်စေရန်တားဆီးထားသောနေရာတစ်ခုပါရှိသည်, နှင့်ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အမှုန့်စုဆောင်းခြင်းများအတွက်အထည်အိတ်ကပ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်.
ဆန်စက်နှင့်ကြိတ်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
ဆန်စက် 150 ~ 200
150 ~ 200 ကြိတ်စက်
K12KW.h / t